Somaliland: Mujaahid Cali Guuray Oo Qormo Xiiso Badan Ka Qoray Shirkii Snm Ee Lagu Qabtay Magaalada Bali Gubadle Ee Xarunta Gobolka Hawd - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Mujaahid Cali Guuray Oo Qormo Xiiso Badan Ka Qoray Shirkii Snm...
Somaliland: Mujaahid Cali Guuray Oo Qormo Xiiso Badan Ka Qoray Shirkii Snm Ee Lagu Qabtay Magaalada Bali Gubadle Ee Xarunta Gobolka Hawd
Mujaahid Cali Guuray Oo Qormo Xiiso Badan Ka Qoray Shirkii Snm Ee Lagu Qabtay Magaalada Bali Gubadle Ee Xarunta Gobolka Hawd
Sawirkani waa Shirwaynihii 5aad ee Baligubadle. Dhawr maalmood ka hor intii aanu furmin Shirwaynuhu ayaa waxa SNM laga qabsaday Zaylac iyo Tokhoshi. Warka ayaa aniga oo markaa ahaa Sarkaalka Wardoonka Iyo Nabadgelyada ayaa isla maalintiiba aan ogaaday. Subax ayaa Baligubadle ka soo dhaqaaqay Axmed Silanyo oo ahaa Gudoomiyaha Xisbiga ayaan kula kulmay Harar aniga oo sii gelaya Eastern Command-ka isna uu ka soo baxay uu Baligubadle ku sii jeeda. Gudida Qabanqaabadu waa 15 xubnood oo mucaarid ah oo is naqaystay waxa Gudoomiye iyo Gudoomiye xigeen isu ah Maxamed Xaashi Cilmi iyo Allah ha u naxariisto eh Cismaan Aden Dool- Quule. Ergedana iyaga ayaa qaybiyay cidda ay aaminsan yihiin baana xulaysa. Taagnida ayaan ugu waramay Gudoomiyaha in Shirwaynuhu yahay madal isaga lagu shirqoolayo ergo mucaarku soo xushayna meesha la keenayo oo xataa Shirgudoonku qorshaysan yahay. Wuxu markaa isagu ka yimi debedda oo muddo ayuu maqnaa intii la shaqaysanayay. Adugu hadal waxan ugu soo gebogebeeyay in aan wax meesha u yaalaa jirin. Ilaahow adigaa ka markhaati ah wuxu iigu jawaabay” waar cidday doonaan ha keenaan eh saw dadka la hadli mayno oo la ina dhegaysan maayo. Marka aynu dadka u warranno ee la ina dhegaysto arinku siday moodayaan noqon maayo oo kufurtu bilaahi in aanay hebel dooranayn oo Gudoomiye noqon doonin eh ina Celi” weger baan idhi anigu nimaankii aan arkayay Shir ay maamulanayaan ugu tegi maayo. Tan kale saw in xeebtii galbeedka la inaga qabsaday ma ogid?
Haa oo hadda ayaaban kala hadlayay Jananka oo waxaabay garan la’ yihiin meel uu cidankii dhamaa jaan iyo cidhib dhigay markaa malaha waanay soo gaadhin eh xaga xadka meel aan ahayn oy u bixi karaan miyay jirtaa? Suaashii aniga oon uga jawaabin ayaan u waydaartay Taliskii Eastern Command-ka. Waxan toos u abaaray Xafiiskii Sarkaalka Wardoonka iyo Sahanka oo waa kii uu beryaha qaar fadhiyi jiray ninkii libaaxa ahaa Col. Amiin oo ahaa khabiir ku xeeldheer arimaha Wardoonka Ciidanka Somaliana Raas Kambooni ilaa Lawyocaddo siduu u qaybsanyahay aad fajacaysay. Lakiin nasiibdarro waa markii ay dayuuraddu la dhacday ee uu ku dhintay oo ma noola cidda markaa aan garanayay oon ku hagaagayayna ma jirto. Markii aan Xafiiskii Imaam galay waxan u tegay sarkaal hoose oo laba xidigle ah. Markaan isu sheegay ayay intay neefi ka soo booday ayuu yidhi ” meel aanu idin kala soo xidhiidhno ayaanu waynay war baanu idinka doonaynay eh bal iiga warran xaaladda ciidankiinii waan maqlay in xeebtii la idinka qabsadaye? Bun horyaalay ayuu ku jeedsaday inu ii shubo koob. Intii baa fursad aan jawaabta sua’aashiisi ku doono ii noqotay. Arkayna in Sarkaalku uu geb yahay wax fikrad ah ka haysanin xaaladda dhulkana waxba ka aqoonin.
Maskaxdu bini aadmigu waa cajiib mar buu ilbidhiqsigu saacad ka badan yahay markiiba sheeko dhan ayaan hortiisa ku alifay xaalad aan jirina waan abuuray. Markuu bunkii ii dhigay ayaan idhi waan la socdaa(ninkii aan warka u soo doontay ayaan anigu u waramayaa) waana arinka aan u socdo. Ciidanka soo weeraray maaha ciidankii aanu naqaanay oo xataa Qaybta 26aad kama tirsana. Waxa la noo soo sheegay in Muqdisho laga keenay oo weliba ay la socdaan ciidan ka tirsan jabhadaha mucaardka Itobiya Tigray, eratariyiin, iyo weliba qaar Oromo ihi. Intaasi markay afkayga ka soo baxday ayuu hadalkii iga dhex galay ” Oo maxay doonayaan kuwaasina?” Waxan idhi ma hubo lakiin waxan mawlay waajibaadkooda waxa ka mid ah inay gooyaan Khadka Tareenka ee Jabuuti iyo Itoobiya, inay run tahay iyo in kale ma cadayn karo.
Markaa hadii aanu SNM nahay go’aan baanu qaadanay aniga ayaana la ii soo diray oo ku socdo. Ciidankayagu dhamaan way ka baxayaan dhulka xeebta ah oo badh waxay gelayaan buuralayda dhinaca Bari ka xigta badhna xadka ayaa ka soo gudbayaan oo waxay ku soo beegan yihiin Garboole aniga ayuun bay war iga sugayaan.
Halkaa marka aan marayo ayuu yidhi dhegayso oo ma qasab baa inay ciidankiinii oo dhan aydin ka soo saartaan Xeebihii ay qabsadeen oo dhan? Waa sua’aal aan u baahnaa in uu i waydiiyo oo isaga afkiisa ka timaado. Hal cabaar ah ayaan jawaabtii daahiyay sidii oon xal ku maqanahay. Maya ma jeclin lakiin xaaladda logistics saadka ayaa laba daraadle ku qasbaysa eh ciidanku ma jecla inay sii daayaan oy ka baxaan dhulkii ay qabsadeen ey ku dhinteen idinka laftiinana in aanay dan idiin ahayn waanu ognahay. “Oo hadii saadka ay u baahan yihiin aad gaadhsiiso saw joogi maayaan? Haa way joogayaan lakiin waa in aan maanta helo ilaa caawana socdo oo ugu dambayn aan beri gaadhsiiyo. Intaa markaan idhi ayuu iga raali ahow yidhi wuu kacay dabeedna wuu baxay oo keligay ayuu xafiiskii igaga tegay. Wuxu igu soo noqday wakhti aan ka badnayn sedex ilaa shan daqiiqadood kiiyoo faraxsan oo nefis ah. Jananka ayaan la socodsiiyay oo amray in wax kasta uu ciidankaasi u baahan yahay hadda farta lagaa saaro. Isla gelinkii dambaba waaniga xidhiidhsaday ee ninkaygii wardoonka uun ahay ee is lahaa maalin iyo laba ilaa Dire Daba ku maqnow ka dibna Baligubadle dib ugu noqon adiga oo qaylo dhaan ah bal in cid ku dhegaysta aad hesho habeenkiiba Ishacddo ayaan Xertii Sheekh Ciise munaaqibka kula akhriyay lixdii subaxnimona bisinka ayaa iska qabsaday ALLAHYOW DAL MA AQAAN ALLAHYOW DAD MA AQAAN QIRI DAAD WADAANEE DAWYO HAYGA RAARIDIN. Dee maxaad ka rabtaa cajaladii aan xalay ku soo gudayay ayaa halkeedii ka socota darawalkuna in uu rogo mooyaane inu ka saaro miyaan u ogolahayba. Adigu subaxnimadiiba xadka meel tuulada Sheekh Ciise dhinaca galbeed ugu toosan ayaan gudaha xadka kaga tuuray Gargaara galbeed baan maray halkaas ayaan Maan daaha ka bidhaansaday 11.00 ba ninka Cali Weeci joogay ee ciidankiisii taakulaynta la gaadhay baan ahaa Baligubadlle iyo Shirka calacastu maamulanayo ma dan baan ka leeyahay. Haduu shir wanaagsan oo daacad laga yahay noqon lahaa saw Baligubadle kaambaynka dhinacayga kamaan galeen. Cadhadii aan Balligubadle ka cadhooday ayaa halkaa ila gashaye.
“Somaliland should seek to sell more to the world” Somaliland Foreign Minister
Somaliland: “Soohdinta Somaliland Iyo Soomaaliya Wadaagaan-na Maaha Mid La Mid Ah Laamiga Gaalkacayo Dhex Mara”
War Deg Deg Ah: Daawo Kulanka Madaxweynaha iyo Mr Peter Drucker Dhex Maray